जब आत्मीयताको राप सेलाउँदै गयो ! – Etajakhabar
जब आत्मीयताको राप सेलाउँदै गयो !
– दिया चन्द
सायद जाडो मौसम सुरु भएर होला, यता आत्मीय भनिएका केहि सम्बन्धहरु पनि चिसिँदै जान थालेका छन्। जब आत्मीयताको राप सेलाउदै जान्छ तब मन र मनबिच यति ठुलो दुरी बढ्छ की कुनै झुलुंगे पुलको सहायताले त्यो अन्तर घटाउँदै जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
त्यति मात्रै कहाँ हो र आजभोलि त् यस्तो पनि भएको छ, उनिसँग जति बोल्यो त्यति नै झन संवादको प्यास तिब्र हुन्छ, जती रसपान गरे पनि तृप्त हुन सकिदैन, कतै कारण मंसिर पो हो की ? म आफै कन्फ्युजनमा छु ।
जब हार्नेहरु जित्छन् थाल्छन् नी तब उनीहरुले अरुलाई जित्ने अवसर नै दिँदैनन् । हो त्यहि बेला आउँछ मज्जा जब हार जित र जित हारमा परिवर्तन भएको त्यो रोमान्चक पल आफ्नो बैराग जिन्दगीमा राग बनेर आउँछ ।
भन्नेहरु त् भन्ने गर्छन् समयले मलाई ठग्यो, एक्लो बनायो, बर्बाद बनायो, यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो तर म भन्छु समयले कहिल्यै कसैलाई पनि ठग्दैन । यो धुर्ब सत्य कुरा हो कि हिजो पनि साठ्ठी सेकेन्डको नै एक मिनेट हुन्थ्यो र आज पनि हुन्छ त्यो भोलि पनि हुनेछ ।
बुझ्नुपर्ने कुरा के भने झुटको खेति गर्नेहरु त मान्छेहरु नै हुन्, जसले रंगिन सपनाहरु देखाएर रङ्गहिन जीवन जीउन बाध्य पारिदिन्छन् । अनि उनीहरु नै ज्ञान गुनका पाठ सिकाउदै भन्छन्, – ‘मुस्कान बिनाको जिन्दगी सधै अन्धकारमय हुन्छ, त्यसैले हरेक बिहानीको स्वागत मुस्कुराएर गर ।’
अब तपाई आफै भन्नुस् यहाँ पहिला मुटु रेटेर घायल बनाउछन मान्छेहरु, अनि सान्त्वनाको मलमपट्टि लगाएर सर्जरी गर्न खोज्छन् अनि कसरि मुस्कुराउछ त्यो अभागी घाइते ?
कुनै चित्रकारले बनाएको सुन्दर कलात्मक चित्र अथवा आम भाषामा भन्नुपर्दा मुर्तिको पुजा गरेर अर्काको बरबादी र आफ्नो खुसीको बरदान माग्नेहरु नै हुन् अरुका भावनाहरुको रेप गर्ने।
‘तिम्रो साथ् त् मेरा निम्ति अमुल्य छ प्रिय’ भन्थ्यो हिजो, आज लाखौंको कार पाएपछि मुल्यहीन भएँ म अनि मेरो माया । फेरिएको साइनोले निरन्तर एक दिशामा हिडिरहेका पाइलाहरु अचानक मोड्नु पर्यो, तिमीले मेरै आखा अगाडीबाट उसको कारको स्प्रिङ मोडे जसरि ।
आजकल फेसबुकका प्रोफाइल पनि त्यति छिटो फेर्दैनन् मान्छेहरु जति छिटो तिमिले आफ्नो प्रेमिका फेर्छौ, मन र मस्तिष्क फेर्छौ । बस मेरो सुभेच्छा सधैं रहिरहनेछ, त्यहि फेसबुक ह्याक गरेजस्तै कसैले तिम्रो जिन्दगी ह्याक नगरोस ।
सास रहुन्जेल साथ दिन्छु भन्नेहरु नै मर्दा मलामी जान अल्छि मान्छन यो समाजमा ! किनकी आफुले गरेको गल्तिको दोष परिस्थितिलाई दिएर सजिलै उम्किन जानेका छन् उनीहरुले । त्यसिले त भन्ने गरिन्छ नी, संसारका हरेक चिजमा नसा हुन्छ, बस फरक यति मात्र हो कि, कुनै नसाले मानिस बन्छ भने कुनै नसाले भत्किन्छ।
अर्को कुरा मानव जीवनमा कहिलेकाहिँ ‘खराब समय’ अर्थात् धेरैले त्यसलाई दशा भनेर पनि भन्ने गरेका छन् यदि त्यो आउँदैन थियो भने पनि आफन्तहरुमा लुकेको दुश्मनीपन र पराइमा लुकेको आफ्नोपन कहिलै देख्न सकिदैनथ्यो होला ।
मेरो भोगाइले भन्छ, जीवन आँफैमा जटिल पक्कै छैन । तर मान्छेहरुको आ – आफ्नो क्षणिक स्वार्थका कारण यहाँ जटिलतामाथि जटिलता थपिदै जान्छन् । र त्यो जटिलताको थुप्रो एकदिन यति ठुलो बन्छ की समस्या कहाँबाट सुल्झाउने भन्ने कुराको टुंगो नै लाग्दैन ।
आचरण हरेक मान्छेका फरक फरक हुन्छन्, स्वाभाव हरेक व्यक्तिका आ – आफ्नै हुन्छन् त्यसैले होला एक पलका लागि भेटिएको कोहि सधैं मनको भित्रिकुनामा डेरा जमाएर बस्छन त कोहि आखामा त कहाँ हो कहाँ एकछिन पनि मानसपटलमा अटाउँदैनन् ।
यी सबै कुराहरु गरिरहदा यस्ता कतिपय समस्याबाट ग्रसित म आफै पनि छु, जसको चाहेर पनि उपचार गर्न कठिन छ । लडेको बेला हात दिएर उठाएजस्तै गरि भए भरको बल प्रयोग गरेर लात हान्ने….
साच्चै कति अनौठो छ यो दुनियाँ कर्मको ख्याल नराख्नेले धर्मको भने बेस्सरी ख्याल राख्छन्, सर्मको सुइँको नपाउनेले र मर्मको पाठ पढाउछन् । हुन् त् नदुखेको मन र नरसाएका नयनहरु कसैका नहोलान तर, निधार फराकिलो हुने भन्दा दिल फरकिलो हुनेहरु अझ बढी बिशाल हुन्छन रे त्यसैले होला मलाई कुनै साना तिना इमोसनहरुले निथ्रुक्क बनाउन कहिले सक्दैन ।
हो यो पनि तितो सत्य नै हो की आजभोलि प्रेममा पनि मिसावट हुन् थालेको छ, पेट्रोल,डिजेल मट्टीतेलमा जस्तै । छल कपट र दुस्साहस हुन्छको सन्त्रास फैलिएको छ, प्रेमिकाहरु प्रेमीको कामबासनाको सिकार हुनु परेको छ । त्यति मात्र कहाँ हो र बाउ आमाले सन्तान बेच्न थालेका छन् भने छोराछोरीले मातापितालाई फोहोरको डङ्गुरमा फालेजस्तै साइट लगाउँदै गइरहेका छन् ।
उनीहरुले कहिले सोच्दैनन् कि मैले आज बेचेको बच्चा पनि भोली मजस्तै बयस्क हुनेछ र त्यसबखतको अवस्था के होला ? अनि छोराछोरीले यो बुझ्दैनन् कि हामि पनि भबिस्यमा गएर यस्तै बुढो बन्नुपर्छ र त्यतिबेला मेरो हालत के होला भनेर । समग्र मानव जगत यस्तै यस्तै भुमरीमा छ, म अनि हामी ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ०८, २०७३ समय: १३:०२:५९